Kedu ihe ntinye nke casinos iji gbanwee ụlọ ọrụ na-adigide - Geofumadas
Kedu ihe ntinye nke casinos ji ghọọ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ
Eprel, 2019 innovations
Ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-agbakwunye na ụdị ụlọ ọrụ kachasị dị n'ụwa taa. Omume a abụghị ihe efu ma ọ bụ ọnọdụ na-adịru nwa oge, kama nke ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ niile ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịnọgide na-azụ dịka azụmahịa nwere. Ọ dị mkpa na ndị niile na-eme ihe nkiri na ọha maara na ọ dị mkpa ilekọta gburugburu ebe obibi na itinye aka na imezi ọnọdụ nke ihe niile.
N'oge a, ndị na-ede akwụkwọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịchọta ihe ndị na-atụ anya ahịa, ma site na ntinye aka iji rụọ ọrụ n'ime ụkpụrụ nke àgwà kachasị elu, nke gụnyere nrube iwu dị ugbu a n'ebe ọ bụla nke ha na-arụ ọrụ.
Nkwado na nkwado ndi mmadu
Ọtụtụ casinos bụ isi amalitela itinye usoro dị oke mkpa iji bụrụ n'ezie ụlọ ọrụ nchịkwa. Ihe banyere Caesars casinos dị na Las Vegas bụ ezigbo ihe atụ nke otu nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike isi gbanwee iji mepụta usoro doro anya nke na-eme ka ọ dịrị na enyi na gburugburu ebe obibi. Ndị casinos a emejuputa usoro atụmatụ atụmatụ carbon na echiche CodeGreen nke ha guzobere na 2008.
Ọzọkwa, isi casinos ndị ọzọ na-etinye aka na ike anyanwụ. Casinos bụ ụlọ ọrụ na-aṅụ a otutu ọkụ eletrik, nke mere na oru mepụtara na-emejuputa atumatu na Wynn sụọ na MGM Resort Las Vegas bụ ịtụnanya na izute ezitekwara a ịrịba pasent nke ume mkpa site casinos.
Online casinos dị ka NetBet, na egwuregwu niile dị egwu na ụdị nkwalite ha na nhọrọ ndị ọhụrụ na ịkụ nzọ, ha na-erekwa ume, ma na nke a, onye ọrụ ahụ na-echefu ego ahụ site na kọmputa ya, ekwentị ya ma ọ bụ ụdị ngwaọrụ ọ bụla ọzọ M na-egwu egwu.
Nkwenye nye ọha mmadụ
Casinos dị ka ụlọ ọrụ ndị gbara mbọ kwekọrọ na gburugburu ebe obibi, ọtụtụ n'ime ha na-esonye na ndụ nke ọha mmadụ gbara ha gburugburu iji melite ya. Dị ka ihe atụ, ha na-enye onyinye maka òtù na-enweghị ego na ọrụ ebere nke na-enyere ụfọdụ ndị obodo aka ma ọ bụ kwalite agụmakwụkwọ na egwuregwu. Ha na-akwado ihe omume ọdịnala ma na-akwado ụlọ akwụkwọ.
N'aka nke ọzọ, ozugbo casinos na-emejuputa ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ iji lekọta gburugburu ebe obibi, ha na-amalite mmata nke ọha mmadụ ma na-akpọ ndị agbata obi ha ka ha mee ihe dịka imegharị na ịchekwa ike. Casinos ga-anọgide na-agbanwe ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ndị oge a na ụwa a ga-elekọta.
Previous Post«Previous Ngwa maka ubi - AppStudio maka ArcGIS
Next Post Leica Geosystems na-enye ngwá ọrụ ọhụrụ iji weghachite data dataNext »